Kwiminyaka elishumi, i-lithium iron phosphate iya kuthatha indawo ye-lithium manganese cobalt oxide njengeyona ndawo yokugcina amandla okugcina amandla?
Intshayelelo: Ingxelo kaWood Mackenzie iqikelela ukuba kwisithuba seminyaka elishumi, i-lithium iron phosphate iya kuthatha indawo ye-lithium manganese cobalt oxide njengeyona ndawo iphambili yokugcina amandla. Tesla ...
Kutheni le nto ecinga ngeLiFePO4 iya kuba yikhemikhali engundoqo yekamva?
Intshayelelo: UCatherine von Berg, u-CEO weNkampani yaseCalifornia Battery, uxoxe ngokuba kutheni ecinga ukuba i-lithium iron phosphate iya kuba yeyona nto iphambili kwikamva. Umhlalutyi waseMelika uWood Mackenzie uqikelele kwiveki ephelileyo ukuba ngowama-2030, i-lithium iron phos ...
Lithium yentsimbi phosphate ibhetri
Ukungena ngoJulayi 2020, i-CATL lithium iron phosphate battery yaqala ukubonelela ngeTesla; Kwangelo xesha, u-BYD Han udwelisiwe, kwaye ibhetri ifakwe i-lithium iron phosphate; Nditsho neGOTION HIGH-TECH, inani elikhulu lokuxhasa iWuling Hongguang esetyenzisiweyo kutshanje ...
I-LIAO ngokuNamandla yokuHambisa iLiFePO4 ibhetri-LAF12V30Ah inikezelwe
Kutshanje, seva iindaba ezimnandi ezivela eYurophu kumawakawaka eekhilomitha kude. Kumdyarho wokuhamba kwebhetri yokuhamba kweekharavani ebibanjwe yi-ANWB (Umbutho weBhayisikile yeDatshi yaseDatshi), iLIAO Eninely Power Mover LiFePO4 ibhetri-LAF12V30Ah ephuculwe yinkampani yethu ibetha zonke ...
Imizamo edibeneyo yoKoyisa Ubunzima besifo
Ubhubhane we-COVID-19 ubusoloko usisihloko seendaba kwihlabathi liphela. Njengeenkampani ezininzi e-China, sijamelene nemiceli mngeni emikhulu ekusebenzeni kwimigca yethu yemveliso nasekuhambiseni iimveliso zethu. Iziko kurhwebo lwamanye amazwe, iTekhnoloji ye-LIAO ikhuthaza ubuhlakani beshishini kunye ...
Umsitho wokuvula intsebenziswano kwiYunivesithi
Umsitho wokutyikitywa kwentsebenziswano yeyunivesithi kunye nesiseko sokuziqhelanisa nokufundisa phakathi kweziko lezenzululwazi kunye nobunjineli, iyunivesithi yaseZhejiang kunye nenkampani yethu, ibibanjelwe ukuvulwa okuhle kwinkampani yethu. Linyathelo elikhulu lokuvula isahluko esitsha se ...